How to rank in Amazon product search like a big-time seller?
Zvose guru guru rekutsvaga muInternet rinoziva kuti inotarisa sei mu Amazon product search. Chinhu ndechokuti hapana imwe nzira yekupfuura ipapo semutengesi anoshingaira, kunze kwekuti iwe uri kuita zvakanakisisa kugadzirisa zvaunogadzira zvigadzirwa mukutsva kuitira kuti nhamba inowedzera yevanhu iri kuzoiona. Cherechedza, zvisinei, kuti nekugara kuri kuchinja A9 yekutsvaga shanduro yekushandura, maAmerica nzvimbo yekutengesa inoda kuti iwe ugare uchitsinhanisa neicho chaicho chitsva. Kunyange zvakadaro, kune nzira yakaratidza kuti inogona kukubatsira kuti unzwisise maitiro ekutsvaga Amazon product search kuitira kuti zvinhu zvako zvinotengeswa kutengeserana ikoko zvingogara zvichionekwa kune chikamu cheshumba chako. Uye pasi ini ndiri kukuratidza kuti ungapedza sei basa racho nenzira yakanakisisa.
Nzira yekuongororwa muma Amazon Product Search
Pamberi pezvimwe zvinhu, iwe uchafanirwa kuziva gwaro guru rekuti iwe unogona kukunda mazwi makuru - fashion jockey hats. Kuti ndipedze basa iroro, ndinokurudzira kushandisa Keyword Planner, kusakosha kweshoko rekutsvakurudza ruzivo neGoogle inowanikwa mukuzarura. Zvinonyanya kukosha, mubatsiri uyu wekare wekutsvaga paIndaneti ndiyo nzvimbo yakatanga iwe iwe kutanga kutanga kuongorora yako huru yezvinyorwa mazwi uye marefu-muswe kutsvaga mazwi. Kana zvangoitika, iwe uchada kunatsiridza hurukuro yako yakanyanya kuva chenguva pfupi chinyorwa chine zvinongoda-kukunda mazwi makuru chete. Hungu, inogona kuonekwa sechinotyisa uye basa rinopedza nguva, asi zvinoshamisika kuti pane zvakawanda zvakasiyana-siyana zvishandiso zvakanyatsogadziriswa mu-zvakadzama keyword kutsvaga kuAmazon.
Pano ndipo paunogona kusarudza kubva: Sellics (zvakanakisisa nokuda kwezvikamu zvekutanga zveAmerica keyword research), Sonar (zvakanaka pakutsvaga mazwi ose anokosha anodiwa kuti atarise chibereko chako), LSI Grafu (a free tool, kunyanya kunobatsira kuti uone maitiro ekugadzirisa muAmerica product search - pamwe chete nemagetsi ayo anowanika mazano ezvinyorwa zvinoenderana nekutengeserana kwako kana chimwe chinhu chaunenge uine kutengeserana uko), Moz (yekutanga search engine optimization service yakagadzirirwa zvakanyatsorongedzwa optimization for the relevant keywords), Thesaurus (hongu, zvakakomba, iri pakati pezvinyorwa zvisinganzwisisiki zvinyorwa zvekutsvakurudza zvinyorwa, kunyanya kuAmazon - saka sei usingazvishandisi mukukwikwidza kwako, zvakanaka?).
Uye pano ndiwo mamwe masarudzo anoshandiswa-anoshandiswa uye mazano anoshanda kuti aenzanise zvakanaka muAzone product search, kunyange iwe uchiri muchengeti wemabhizimisi wepakombiyuta angangotengesa ipapo kwenguva yekutanga:
Usanonoka kupa zvikwereti kana zvimwe zvinoshamisa zvinoshandiswa - inzira inonyanyisa yekusimudzira kushandiswa kwezvinhu zvako kubva pakutanga.
Iva nechokwadi chokuti uri kupa kugutsikana nevatengi vako (ramba uchicherechedza Nharo dzako dzeNyeredzi uye Dheteti yeDhete yeDare pamusoro apo).
Chengetedza chigadzirwa chakakwana chawanikwa.
Kunyange zvazvo zvakanyanya kuoma kuita kuti zviitwe zvizere, ndinokurudzira zvakasimba kubhadhara zvakanyanyisa kumutengo wako wokubuda. Ndiyo mitemo inokosha zvikuru, kunyanya kana iyo inosvika pakuyera chigadzirwa chako chiri mu Amazon item search.